Inkcubeko yeNkampani kunye namaxabiso - i-NBC yeTekhnoloji yeTekhnoloji yase-Co, Ltd.
Kutheni uQeqesha uHoud
Ndinombulelo kumthengi, ukwamkelwa kwabo bonke abasebenzi abakhutheleyo, abanengqondo ephangaleleyo kunye nokungazingci kwiNdlu (ububele obukhulu, isimilo).
I-NBC ithetha ingqondo ebanzi yomqeshwa, ukunyamezelana, ukufuna ukugqibelela nokuzigqwesa, kuthetha ukuba umoya awusoze uthothise, ufuna ukugqwesa. I-NBC ivela kwi-3 yokuqala ye-grapheme yokubizwa kwe-Mandarin (NaBaiChuan), emnyama nebomvu yelogo kuthetha ukuba "ulwandle luqokelele amakhulu eerives ukuseta enkulu" yenkampani.
Inkampani u-Brand Anen, thabatha igama elifutshane lika "Anen"
Ukuzibophelela kweBrand yethu
Ukhuseleko olonga umbane kunye nokusingqongileyo.
Umxholo weBrand yethu
Sigxininisa ekuziqhelaniseni nabathengi, sigxininisa kunxibelelwano nomthengi, siqonde ngokunzulu ukulindelwa kwabathengi kwaye sihlangabezane neemfuno zabo, sithathe uxanduva ngokukhawuleza, ukuphucula ukoneliseka kwabathengi. Yenza umthengi aphumelele, asondele kwintsebenziswano yexesha elide kwaye aphumelele kabini.
Ulwaneliseko lwakho alusosiphumo, sisiqalo sethu esitsha.
Ukunyaniseka nokuthembeka: Ukunyaniseka omnye komnye, ukwenza isiseko seshishini. Nyaniseka kwisiqu sakho, uhlala ulungele uxanduva, qaphela amandla kunye nokusilela kwakho, ukuphucula okuqhubekayo. Kwaye masinxibelelane ngokunyanisekileyo ngentliziyo yethu yonke, senze iinzame zethu zokuphumelela ukuthembela kwakho.
Simamela ngononophelo iingcebiso zabasebenzi, sixoxa ngengxaki yezobuchwephesha kunye nomthengi kwaye sinike iingcebiso zethu, ngentsebenziswano ethe kratya ukuphucula imeko yezentengiso, ukudala ixabiso nokwabelana ngenzuzo kunye nabachaphazelekayo, kwaye sijamelana namathuba kunye nomceli mngeni kunye nabo.
Ithemba i-NBC, sinokuhlangabezana nolindelo lwakho kwaye sihlala sisenza izinto zibe ngcono! Ngesimo sengqondo esifanelekileyo, i-NBC inokuqonda kwaye ibambe intsingiselo yophuhliso lweshishini, ngokusekwe kwiimfuno zabathengi, ukuqhubekeka kwezinto ezintsha, ukuseta iqela elinamandla lobuchwephesha, ukubonelela ngeemveliso ezikhuphisanayo kunye nesisombululo, ukwenza ixabiso kubathengi ngokuqhubekayo.
Ukufuna iqabane kwishishini kwihlabathi liphela, ukusebenza okwenziwa ekhaya, ukubonelela ngenkonzo efanelekileyo kubathengi.
Inzululwazi, ukhathalelo lomntu, imbeko, umgangatho, impendulo ekhawulezileyo, efuna ukugqwesa.
Abanyanisekileyo, umgangatho olungileyo uzuze ukuthembela, ukusebenza, ukuxhamla, ukuphumelela.
Imbeko, ukuthembeka, ukuzibophelela, ukuziqeqesha, ubulungisa
Ekujoliswe kuko ngobuchule
Ngokusekwe kwilizwe lemveli, sebenza kwihlabathi liphela, ukwenza ishishini elinesidima lehlabathi.
Ukugxininisa kwixabiso lokuziqhelanisa nabathengi, ngokusekwe kubazabalazi, inyathelo ngenyathelo, ukuqhubeka nokuphucula umbutho, inkqubo, imveliso kunye nempumelelo, ukwenza inkampani ukuba ibe nophuhliso oluzinzileyo lwexesha elide. imigaqo yomvuzo neyokohlwaya; Ukuhambelana ngokupheleleyo nomthetho, ukugcina ubulungisa nobulungisa, Inkqubo yokumisela inkuthazo efanelekileyo, ukwenza inqanaba lempumelelo kumqeshwa.
Ukulungelelanisa utshintsho olululo kwimizi-mveliso, iNabaichuan, inkampani ihlala ivelisa izinto ezijikeleze iimfuno zabathengi kunye netekhnoloji, ivula kwaye isebenzisana nomzi mveliso kwaye iqhubeka ngokudala ixabiso kubathengi nakuluntu. INabaichuan izinikele ekutyebiseni unxibelelwano lwabantu kunye nobomi kunye nokuphucula ukusebenza kwabo ngokukuko. Kwangaxeshanye, sizama ukuba lukhetho lokuqala kunye neqabane elifanelekileyo kubathengi bethu, kwaye sibe luphawu oluthandayo.
Ukumamela ngenyameko kunye nokuqonda nzulu iimfuno zabathengi; ngokunyanisekileyo anikele inkonzo egqibeleleyo.
Ejolise kuluntu, ulawulo lwezenzululwazi, ugqweso.
Ukhuseleko kunye nokusingqongileyo, uphuhliso oluhambelanayo, ukwaneliseka kwabaxumi.
I-HOUD (NBC) cinga ngaBasebenzi njengeziseko zenkampani kunye nenjini yophuhliso. I-NBC ifumana kwaye icebise abantu abanetalente ngokukuko, bafumane zonke iintlobo zetalente yezobuchwephesha kunye nolawulo kolu shishino, ukwenza iqela lolawulo olomeleleyo kunye neqela lobuchule lobugcisa.
Umgaqo osisiseko: bonelela ngamathuba kwabo bafuna ukwenza into, banike isikhundla esifanelekileyo kwabo banokwenza okuthile, vuza abo benze into.
1. Ukukhetha iitalente
Umgangatho wokukhetha italente, ubuntu kunye nokuzalwa yeyona nto ibalulekileyo, imigaqo yokuziphatha iphambili, emva koko sikhathalela ukuzimisela kwabo ukusebenzela inkampani, kwaye siqwalasele ukuzibophelela kwabo kunye nokuzimisela kwabo, emva koko sijonge kumzamo wabo kunye namava okusebenza, okokugqibela enkulu kunye nemfundo.
2. Uqeqesho lweetalente
Ukuphuculwa kokukwazi kwabasebenzi kubalulekile kuphuhliso lwenkampani, uqeqesho lwabasebenzi luya kubaluleka kakhulu koku. I-HOUD (NBC) ibonelele ngoqeqesho olusuka kulwazi olusisiseko ukuya kubuchule bobuchule kubasebenzi ngokuxhomekeke kwizikhundla zabo nakwimfuno yeshishini. Umqeshwa omtsha uya kuba noqhelwaniso olubanzi, imodeli yokuphucula ubuchule esetyenziselwa ukunceda umqeshwa omtsha ukudibanisa umsebenzi ngokukhawuleza
3. Ukusetyenziswa kwetalente
Umgaqo-nkqubo wokusetyenziswa kwetalente kwi-HOUD (NBC): ukuzibophelela, umnqweno wokufunda, amandla okwenza izinto ngokuzimisela, ukulungele ukuthatha uxanduva, uqeqesho, ukusebenza kakuhle kweqela. Ngokusekwe kwimpumelelo, ubuchule buxabisekile kwi-NBC, xa wenze umsebenzi olungileyo, obalaseleyo, uya kunyuselwa kwindawo elungileyo yokuphucula ukuziqhelanisa. Kwangelo xesha, ukusetyenziswa kwetalente kusekwe kwiimpawu zabo. Abo banako ukuzalisekisa amandla akhe yitalente ngeendlela ezithile. Siza kunika isikhundla esifanelekileyo somqeshwa ngokusekwe kwinqanaba labo, ukomelela, amava, isimilo, ukuqinisekisa ukuba italente yabantu isetyenziselwa elona thuba lilungileyo, qinisekisa ukuba i-NBC iyaqhubeka ngokuqhubekekayo, ngokukhawuleza nangokufanelekileyo.
4. Ukugcinwa kwetalente
Uphuhliso lweshishini luvela kwigalelo lomqeshwa, uphuhliso lweshishini iya kuba yindawo yophuhliso lwabasebenzi.
I-HOUD (NBC) igcina ingqalelo kulimo lwabasebenzi, ubuncwane kunye nokhathalelo ukuqinisekisa ukuba wonke umsebenzi unokusebenza ngolonwabo kwaye aphuhlise amandla abo kangangoko. Izinto ezenziwa rhoqo zibanjwa ukuphucula ukusebenza kweqela, ukuphucula unxibelelwano kunye nokunxibelelana, ukuphucula ukuqonda nokudibana. Kwangelo xesha, inkqubo yenkuthazo yayisetwa kwi-HOUD (NBC): "ulawulo lwezinto ezintsha kunye nesindululo sokunika imbasa", "ibhaso elingekabikho labasebenzi", "ibhaso lomsebenzi eligqwesileyo", "ibhaso lomphathi obalaseleyo" kwabo benze igalelo elifanelekileyo emsebenzini . Kwaye inkqubo yokhuseleko ebanzi yanikezelwa kubasebenzi, ipati yokuzalwa yayiqhutywa qho ngenyanga kubasebenzi. Ibhonasi yonyaka iya kunikwa ngokusebenza komntu kunye nempumelelo yakhe. Kwaye inkqubo yokuphuma yabasebenzi kunye noqeqesho zanikezelwa ukuphucula amandla kunye nexabiso lomsebenzi.